बराबरीमा रोकियो द रियल ब्रदर्श – Khel Dainik
बराबरीमा रोकियो द रियल ब्रदर्श
पथरी (खेलदैनिक) । खेलको अन्तिमतिर सम्हालिन नसक्दा द रियल ब्रदर्श एफसीले पथरीमा जारी टेन्सबर्ग पथरी शनिश्चरे फुटबल प्रिमियर लिगमा आइतबार बराबरी खेल्न बाध्य भएको छ ।
पथरी स्टेडियममा भएको समूह बी तर्फको दोस्रो खेलमा द रियल ब्रदर्शले वाई.जि.एफ.टी. सँग १–१ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँड्न बाध्य भयो । खेलको १२औं मिनटमै सुजन खत्रीको गोलबाट अग्रता बनाएको द रियल ब्रदर्शले त्यो अग्रतालाई अन्तिमतिर गुमाउन पुग्यो ।
उता खेलको अन्तिमसम्म पनि हार नमानेको वाई.जि.एफ.टी. का लागि अन्तिमतिर इन्जुरी समयमा निमन लिम्बुले गोल गर्दै टोलीको सम्भावित हार टारेका थिए भने द रियल ब्रदर्शसँगको महत्वपूर्ण एक अंक खोस्न समेत सफल भएका थिए ।
खेलमा वाई.जि.एफ.टी. कै संजय लिम्बु म्यान अफ द म्याच घोषित भए । लिम्बुलाई पथरी–२ का वडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता यम प्रसाद गुरागाईले पुरस्कृत गरेका थिए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत मंसिर २९ गते सोमबारको खेल समूह ए तर्फको हिम–अस हाइवे एफसी र हेरिकास न्यु स्टार एफसीबीच हुने आयोजकले जनाएको छ । पथरी शनिश्चरे नगरपालिका भित्रका कुल आठ टोलीहरुको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद १ लाख ७५ हजार हात पार्नेछ भने उपविजेताले ७५ हजार प्राप्त गर्नेछ ।
प्रतियोगितामा सहभागि आठ टोलीहरुलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहको शिर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने पौष ११ गते शनिबारका दिन हुनेछ ।
← फुटबलर कार्कीको उपचार खर्च समर्थकहरुले नै ब्यहोरे नेपालको तयारी शुरु, अष्ट्रेलिया र जोर्डन बलियो प्रतिद्वन्द्वी →
रोहितको टोली जकार्ताको लगातार दोस्रो हार मंसिर २८, २०७७
दोस्रो खेलमा पनि किरनको नयाँ टोली माजियाको फराकिलो जित मंसिर २८, २०७७
झापालाई हराउँदै फिदिम सेमिफाइनलमा मंसिर २८, २०७७
इटहरी रनिङ कपः वार्ड नम्बर ३ र २० क्वाटरफाइनलमा मंसिर २८, २०७७
लिगमा सोमबार भएका दुई खेलहरु बराबरीमा सकिए मंसिर २८, २०७७
सहारा हङकङमा दिपक सर्वसम्मत मंसिर २८, २०७७